के काठमाडौंमा घर हुँदैमा घमण्ड गर्नैपर्छ त? – Rapti Khabar
उनका समस्या आर्थिक समस्या मात्र नभएर मानसिक समस्या पनि थियो। किन यति ठूलो ग्याप छ त काठमाडौंमा घर हुने र काठमाडौंबाहिर घर हुने मान्छेहरूको बीचमा? आखिर यो ग्याप के कारणले गर्दा भएको हो त?
किन यस्तो खाडल उत्पन्न भएको छ त काठमाडौंमा घर हुनु र नहुनुमा? के काठमाडौंमा घर हुँदैमा धेरै घमण्डगर्नैपर्छ त? के सिकिरहेका छौं हामी? के सिकाइरहेका छौं त हाम्रा बालबच्चाहरूलाई?
मलाई लाग्यो कि यो समस्या धेरैलाई छ। आखिर ठाउँ विशेषले मानिसको योग्यता, क्षमता र पहिचानमा कुनै भिन्नता ल्याउँछ त? के राजधानीबाहिर जन्मे, हुर्केको मान्छे क्षमताविहीन नै हुन्छन् त?
(यो लेखको आशय सबै मानिसले यस्तै व्यवहार गर्न खोज्छन् भने भन्न खोजेको होइन। धेरै मानिसको साझा समस्या, र कहिलेकाहीँ आफूले भोगेको भोगाइलाई लेखनमा उतार्ने जमर्को गरिएको हो। यहाँ कति मानिसहरू धेरै असल पनि छन्। त्यसकारण कोही कसैलाई व्यक्तिगत लिन भने खोजेको छैन।) -सेतोपाटीबाट साभार
असोज २१, बुटवल- विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ कायम भएको छ । मङ्गलबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सम्बोधनपछि भएको मतदानमा सरकारको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको हो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी कायम भएको छ । प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा १३ मत परेको थियो । […]
वार्ता के का लागि ? संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद !
Posted on July 16, 2019 Author Rapti Khabar
प्रवास देखि । म वार्ता विरोधी होइन तर वार्ता किन र केका लागि भन्ने कुरा पहिले स्पस्ट हुनजरुरत छ विगतका इतिहास पल्टाएर हेर्दा क्रान्तिकारीहरु वार्ताबाट नै पतन भएका छन २००७ साल देखिको इतिहासले यहि पुष्टि गर्दछ । तत्कालीन काङ्रेस एमाले माओवादि सबै यहि वार्ताबाट पतनको बाटो रोजेका या लिन पुगेका हुन । त्यो उनिहरु नै […]
यसरी बनेको थियो ‘नेपाल घुम्नै नहुने सात कारण’ को भिडियो, हेर्नुस